Soosaarayaasha Dibedda, Shirkadaha - Warshadaha Dibedda Shiinaha
warshad nin jumlo ah oo kabaha lagu ordo, iibka kulul ee loo yaqaan 'sneakers' cusub, ragga kabaha isboortiga
Isku day maalin farxad leh oo kaa buuxsada kabaha lugaynta! Maqaarka maqaarka ah iyo mesh kore. Xiritaanka lebbiska Daboolka suulasha lugaha caagga ah. Ciribta ciribta. Carrab jilicsan iyo collar. Xarkaha mesh-gaxa leh ee nashaada leh ayaa bixiya dareenka kabaha sare. Khadka dhexe ee EVA wuxuu bixiyaa raaxo deggan. Qalabka roondada leh wuxuu keenayaa cimri dherer badan, xasilooni, iyo qulqulka Macluumaadka Alaabada Maqaalka: 5053 Magaca badeecada: warshad naqshadeynta kulul ee kulluubka ragga ee kabaha kabaha sare Maqaalka sare: isku-darka pu, faux maqaar, aniga ...
Kabaha Dibadda ee lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay ragga Kabaha Ciyaaraha fudud
Naqshadeynta sare ee lagu kalsoonaan karo iyo xajinta sare ee kabaha kabaha safarka ayaa hubin doona in jawiga xun uusan waligiis ka gaabin qorshahaaga socodka. Kabaha ciriiriga hooseeya ee dhaqdhaqaaqa raaxada leh. Xirmooyin dhaadheer oo waara oo xirmo leh. Kabaha suufka ciribta iyo ciribta si loogu ilaaliyo xasuuq dheeraad ah. Qaabka dhar-dhaqameedku u habboon yahay oo ku habboon. Xarkaha dhar-xidhka ah ee la isku neefsan karo oo loogu talagalay raaxada gudaha. Qalabka dhexe ee fudud ee raaxada dheer, raaxada dheer, iyo soo laabashada tamarta sare. L ...
naqshad cusub oo lugeynaysa dharbaaxada dharka jilicsan ee kabaha neefsashada leh ee ragga
Kabaha ciriiriga ahi waxay hubinayaan inaad cagahaaga ku taagnaato adoo kalsooni ku qaba cagahaaga maalinta oo dhan inta aad sii waddo socodsiintaas. Dharbaaxada fudud ee lugayntu waxay ka kooban tahay dhar iyo kor. Dahaarka dharka ah ee loo xidho. Laba-cufnaanta isku-kicinta isku-shaandheynta ee loo yaqaan 'EVA midsole' waxaa loo farsameeyay si ay u bixiso iska caabin adag oo dheeraad ah oo ku saabsan gogosha iyo wajiga dheer. Dib-u-soo-noqoshada sare ee dabeecadda 'Anatomical' ee loogu talagalay raaxada maalinta oo dhan. Caag khaas ah ayaa bixiya jahawareer qabow. Nambarka Macluumaadka Waxsoosaarka: 5051 Pro ...
Imaatinka cusub ee Mareykanka 12 Gu'ga oo laga sameeyay Shiinaha kabaha lagu nasto ee Neefta leh
Ka ilaali qofka aad jeceshahay in aad kor uga soo-riixdid ama kor ugaadhka buuraha kabaha safarka ah ee lagu kalsoonaan karo. Kabaha xasilloon, kaydinta dhexe ee muuqaalka leh ayaa ka samaysan muraayadaha miskaha neefsashada iyo isugeyn waara oo waara. Naqshadaynta ciribta-ciribta lugaha leh ayaa leh xirmo xarig ah, koodh jilicsan oo jilicsan, ciribta jiida-tab, iyo tabka ciribta difaaca. Muujinta lugta cariiriga leh ee loo yaqaan 'CRA' oo fadhida iyo jaakad jihada badan jiheysa si ay u amaahan karaan jiidis aad u wanaagsan. Nambarka Macluumaadka Waxsoosaarka: 5050 Magaca badeecada: goynta dhexe ee lugaynta kabaha bannaanka ugu caansan ee m ...
Ragga banaanka sare ee buur-jeexjeexan ee sare ee isboortiga ayaa jimicsiga kabaha kabaha lugeeya
Kabaha ayaa kaa ilaalin doona nabadgelyada intaad socod ku jirto ama aad ka shaqeyneyso bannaanka weyn ee leh xasiloonida kahortagga iyo xajin dheer oo joogto ah. Mamoglage mlon mesh iyo synthetic pu sare. Kabaha sare ee muuqaalka leh waxay bixiyaan badbaadin canqowga ah. Xarkaha dhar-xidhka ah ee la isku neefsan karo oo loogu talagalay raaxada gudaha. Nidaamka lacing dhaqameedka ah ee loogu talo galay ku habboon oo aamin ah. Miisaan fudud, fargeeto waara ayaa hubaal ka dhigaysa dabacsanaan iyo xasillooni. Qalabka dhexe ee dib-u-soo-celinta wuxuu nuugaa saamaynta si aad u fiican u nuugista shoogga oo aad ubuc cagahaaga pr ...
Kabaha isboortiga ee loogu talagalay ragga iyo dumarka Kabaha isboortiga ee 2020 Classical External M ዘላቂ
Kabaha ayaa ku faanaya mesh qafiif ah oo fudud oo waara oo leh koronto burbursan oo diyaar u ah inuu ku qaado dhammaan noocyada dhul-gariirka. Kabo-safareysyo hooseeya oo muuqaal hoose leh oo ka sameysan mesh waxqabadka sare. Xiritaanka kor-u-qaadista si dhaqso leh loogu habeeyo iyo jajab aamin ah. Koofiyadaha badbaadada suulka Keliya-cufnaanta EVA qadka dhexe ee xasilloonida cagaha dheer iyo xasilloonida naxdinta leh. Qalabka jajabka ayaa bixiya jiiditaan dheer. Maqaalka Macluumaadka Badeecada No: 5052 Magaca badeecada: midabka moodada leh kabaha dibedda ee naqshadaynta leh ...
Qandaraasyada kulul ee loo yaqaan 'Amazon Hotals' oo ordaya Kabaha Ragga Roogaga Soo Saara Kabaha
Kabaha lugeyntu waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku raaxaysato daqiiqad kasta oo ku aaddan jidka hawadiisa diyaarka u ah cimilada, taageerada cagta hoosteeda, iyo qabashada la isku halleyn karo. Maqaar suede iyo sare mesh. Carrab jilicsan iyo collar. Ilaalada suulku ka ilaali dhagxaanta iyo qashinka burburka. Nidaamka dharka-dhaqameed loogu tala galay oo ku habboon aaminka. Tababbarka ciribta. Dahaarka mesh Neefsiga leh. Qalabka la dhaqaajin karo ee la isticmaali karo wuxuu siiyaa taageero dabacsan iyo raaxada salka. Cadaadiska iyo qaabeeyaha raaxada ETA. Kabayare GRIP wuxuu bixiyaa tig waara ...